paInternet Stainless simbi - China Langzhi Welding Equipment
Overview gadziriro iri ganged pamwe nyere rokuita muchina. It raigona vachiwirirana nezvisikwa configuration vazhinji zvichienderana zvakakodzera. P + T: Nokuti chibhakera bara, yeplasma vachagamuchirwa se kuti bottoming kutekeshera kuti nomoto musono kuva mumwe avhareji yakarurama mutsetse (Mumwe bara aigona kupfuura 8mm kana bellowing ukobvu ndiro). Nokuti bara wechipiri, argon chinhu chakakombama Welding muchina richashandiswa zvokugadzirisa kuti pamusoro kumeso pasina sidewall undercut .. T + P + T: First bara riri preheat pamwe argon riemukaari nomoto, S ...
gadziriro iyi ganged pamwe nyere-kugadzira muchina. It raigona vachiwirirana nezvisikwa configuration vazhinji zvichienderana zvakakodzera.
P + T: Nokuti chibhakera bara, yeplasma vachagamuchirwa se kuti bottoming kutekeshera kuti nomoto musono kuva mumwe avhareji yakarurama mutsetse (Mumwe bara aigona kupfuura 8mm kana bellowing ukobvu ndiro). Nokuti bara wechipiri, argon chinhu chakakombama Welding muchina richashandiswa zvokugadzirisa kuti pamusoro kumeso pasina sidewall undercut ..
T + P + T: First bara riri preheat pamwe argon riemukaari nomoto, bara wechipiri kushandisa yeplasma kutekeshera nomoto uye wechitatu bara kuti vagadzirise nokushandisa argon riemukaari nomoto, kana achiwedzera anowanika Welding-waya kuti zvokunze nomoto musono module pamusoro yakanaka . ino ndiyo akakodzera 1.8mm-12mm ukobvu SS nyere azoshandiswa mutsetse.
T + T + T: By yekutora Muti negative danda nomoto michina, akamisa 3 vari Welding patepi Welding azoshandiswa mutsetse, nomoto kukurumidza achapiwa nani nokuda macalorie bindepinde. First bara vane chinhu chakakombama-famba basa, izvozvo zvinobudirira aigona kubvisa mafuta uye kumwedzi uye kwerubwinyo rwakagara rwuripo kupisa basa-chimedu. Tumirai bara nokuda kutekeshera nomoto uye wechitatu bara riri kugadzira. Izvi zvinogona zvinobudirira kudzivisa kukonzera vaiitawo / pore / jecha-gomba etc. Vakawanda usded kupinda nomoto kuti utsanana chubhu giredhi food- / kupisa-Exchange chubhu / condenser chubhu uye Ti Tube
Welding razvino 0-500A
Welding havukavu 0-3000mm / Maminitsi
nomoto ukobvu 2-12mm
Previous: zvine bhodhi nomoto
Chiwanikwa Steel Welding